Kuzoshuba kwezakopelisa uMatric | Isolezwe
Kuzoshuba kwezakopelisa uMatric
Isolezwe / 18 December 2012, 1:22pm /
IZOBANJWA imiphumela yezikole ezakopelisa abafundi ngesikhathi kubhalwa izivivinyo zikaMatric KwaZulu-Natal.
Abafundi baseShayina High, KwaNgwanase enyakatho yesifundazwe bazobanjelwa imiphumela kuze kuqinisekiswe ukuthi yonke into ihambe kahle njengoba kwaba khona izinto ezingahamba kahle ngesikhathi kubhalwa.
Inhloko yoMnyango wezeMfundo esifundazweni, uDkt Nkosinathi Sishi, ithe namhlanje wusuku lokuthi bahambise umbiko mayelana nazo zonke izinto ezenzeka ngesikhathi kubhalwa izivivinyo.
USishi uthe eShayina bamkhombe indlela uthishanhloko wakhona, kanti kumiswe nabanye othisha abebegade ngesikhathi kubhalwa.
“Lesi sifundazwe asidlaleli nje ezivivinyweni zikaMatric sexwayisa noma ngubani ozobeka engcupheni izivivinyo ukuthi ngeke size simbekezelele. Uthishanhloko waseShayina uxoshiwe samisa nabanye othisha kanti imiphumela yabafundi izoke ibanjwe kusabhekwa izinto,” usho kanje.
Uthe bazophenya yonke imiphumela yalaba bafundi ukuthi iyahambisana yini neyezivivinyo abebezibhala unyaka wonke.
“Umuntu esimbamba ekopelisa abafundi siyamxosha ngoba sinazo izinhlelo eziqinile ezibhekene ngqo nezivivinyo. Abanye abafundi abebekopelana sibabamba uma sekumakwa ngoba abanye kutholakala izimbuzi abanye sibone ngendlela abebephendula ngayo imibuzo ukuthi bebekopelana,” kuqhuba uSishi.
Uthe naseDurban High, imiphumela yakhona izobhekwa ngelokhozi wathi zonke lezi zehlakalo bazozibika eMnyangweni kazwelonke namhlanje.
“UMnyango kazwelonke iwona ozohlanganisa umbiko wokuthi izivivinyo zihambe kanjani.”
Mayelana nesikhalo esake saba khona ngokuthi abanye bothisha abebemaka bebengekho ezingeni, uSishi uthe abamakayo bebenamava ngoba eqoqweni bekuba khona umuntu oyinhloko kwezokumaka.
Uthe ngaphandle kwezigameko ezincane yonke into ihambe kahle.